Ọ bụrụ na Don'tmaghị Ihe WordPress Child Theme bụ ... | Martech Zone
Na-agbanwezi ederede WordPress na ezighi ezi.
Anyị ejiriwo ọtụtụ ndị ahịa rụọ ọrụ wee wuo ọtụtụ narị saịtị saịtị WordPress ọtụtụ afọ. Ọ bụghị na ọrụ anyị bụ ịmepụta saịtị WordPress, mana anyị na-eme ya maka ọtụtụ ndị ahịa. Ndị ahịa anaghị abịa iji saịtị WordPress oge niile. Ha na-abịakwute anyị iji nyere aka bulite saịtị ha maka ọchụchọ, mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ntụgharị.
Ọtụtụ mgbe, anyị na-abanye na saịtị ahụ iji bulie ndebiri ma ọ bụ wuo ndebiri ọhụụ ọhụụ, anyị na-achọpụta ihe jọgburu onwe ya. Anyị na-ahụkarị isiokwu a haziri nke ọma, nke akwadoro nke a zụtara dịka ntọala nke saịtị ahụ wee bụrụ nke ụlọ ọrụ gara aga gbanwere nke ukwuu.
Idezi isi isiokwu bụ omume jọgburu onwe ya ma chọọ ịkwụsị. WordPress mepụtara Mụaka Gburugburu ka ụlọ ọrụ nwee ike hazie isiokwu n’ebughị koodu isi. Dabere na WordPress:
Isiokwu ụmụaka bụ isiokwu ketara ọrụ na imezi isiokwu ọzọ, akpọrọ isiokwu nne na nna. Isiokwu ụmụaka bụ ụzọ akwadoro isi gbanwee isiokwu dịnụ.
Ka isiokwu na-abawanye ụba, a na-erekarị isiokwu ahụ ma na-emelitekwa oge iji lekọta chinchi ma ọ bụ oghere nche. Fọdụ ndị na-emepụta isiokwu na-aga n'ihu na-eme ka atụmatụ dị na isiokwu ha karịa oge ma ọ bụ na-akwado isiokwu ahụ site na mmelite mbipute WordPress. Anyị na-azụta imirikiti isiokwu anyị Okwu. Ga-ahụ na isiokwu ndị dị n'elu na Themeforest na-ere iri puku kwuru iri puku ma nwee ụlọ ọrụ imepụta zuru ezu na-aga n'ihu na-akwado ha.
Mgbe anyị na onye ahịa na-arụ ọrụ, anyị nwere ka ha nyochaa isiokwu iji hụ atụmatụ na ọrụ ha masịrị. Anyị na-ahụ na isiokwu ahụ na-anabata na ngwaọrụ mkpanaka ma nwee nnukwu mgbanwe maka nhazi na ụzọ mkpirisi maka nhazi. Anyị na-enye ikikere ma budata isiokwu ahụ. Imirikiti isiokwu ndị a na-ebute ngwugwu na a Okwu Ụmụaka. Wụnye ma Okwu Ụmụaka na Isiokwu Ndị Mụrụ, wee rụọ ọrụ ahụ Okwu Ụmụaka na-enye gị ohere ịrụ ọrụ n'ime Okwu ụmụaka.
Na-ahazi Okwu nwata
A na-ejikarị isiokwu ndị nne na nna mee ụmụaka Gburugburu ma kpọọ aha ya na Child na ya. Ọ bụrụ na isiokwu m bụ Avada, A na-akpo Theme Child a dika Avada Child ma di n’ime avada-nwa folda. Nke ahụ abụghị nkwekọrịta aha kachasị mma, yabụ anyị weghachite isiokwu ahụ na faịlụ style.css, weghachite folda ahụ na ndị ahịa, wee tinye nseta ihuenyo nke saịtị ikpeazụ, ahaziri. Anyị na-edozikwa nkọwa mpempe akwụkwọ ụdị ka onye ahịa nwee ike ịmata onye wuru ya n'ọdịnihu.
Ọ bụrụ na a Okwu Ụmụaka anaghị esonye, ​​ị ka nwere ike ịmepụta otu. Otu ihe atụ banyere nke a bụ Okwu ụmụaka anyị mebere maka ụlọ ọrụ anyị. Anyị kpọrọ isiokwu DK New Media 2018 mgbe saịtị anyị gasị na afọ ahụ etinyere ya ma debe Okwu Ndị Na-eto Eto na folda otu-asatọ. A na-emelite usoro CSS na ozi anyị:
/ * Aha Aha: DK New Media 2018 Nkọwa: Okwu nwata maka DK New Media dabere na isiokwu Avada Onye edemede: DK New Media
Onye edemede URI: https://dknewmedia.com Template: Avada Version: 1.0.0 Text Domain: Avada * /
n'ime Okwu Ụmụaka, ị ga-ahụ ndabere nne na nna dabere dị ka template.
N'èzí ụfọdụ ederede CSS, faịlụ ndebiri mbụ anyị chọrọ ịgbanwe bụ n'okpuru. Iji mee nke a, anyị depụtaghachiri faịlụ footer.php site na isiokwu nne na nna wee depụtaghachi ya na otu-asatọ folda. Mgbe ahụ, anyị dezie faịlụ footer.php na nhazi anyị na saịtị anyị chere na ha bụ.
Otú Isiokwu Childmụaka Si Arụ Ọrụ
Ọ bụrụ na e nwere faịlụ na Okwu Ụmụaka na Isi Okwu Nne na Nna, faịlụ Nwa Okwu. Ewezuga bụ function.php, ebe koodu ga-eji rụọ ọrụ abụọ. Childmụaka Gburugburu bụ azịza dị mma maka nsogbu siri ike. Edezi isi isiokwu faịlụ bụ a-mba na-ekwesịghị-anabata ndị ahịa.
Ọ bụrụ n ’ị na-achọ ụlọ ọrụ ka ha wuoro gị saịtị WordPress, chọọ ka ha mejupụta Okwu ụmụaka. Ọ bụrụ na ha amaghị ihe ị na-ekwu maka ya, chọta ụlọ ọrụ ọhụụ.
Mụaka Gburugburu dị oke egwu
Goro ụlọ ọrụ ka ha wuoro gị saịtị, ha ewepụtala isiokwu nne na nna na-akwado nke ọma yana isiokwu ụmụaka ahaziri nke ọma. Mgbe saịtị ahụ tọhapụrụ ma mezue nkwekọrịta ahụ, WordPress wepụtara mmelite mberede nke na-agbazi oghere nche. Update imelite WordPress na saịtị gị ugbu a agbaji ma ọ bụ oghere.
Ọ bụrụ na gị n'ụlọnga dezie ndị Isiokwu Ndị Mụrụ, ị ga-efu. Ọbụlagodi na ịchọtara isiokwu nne na nna emelitere, ị ga-ebudata ya ma dozie nsogbu koodu ọ bụla iji gbalịa ịmata nke mgbazi na-edozi nsogbu a. Ma ebe ọ bụ na gị n'ụlọnga mere oké ọrụ na mepụtara a Okwu Ụmụaka, ị budata emelitere Isiokwu Ndị Mụrụ ma wụnye ya na akaụntụ nnabata gị. Ume peeji na ihe niile na-arụ ọrụ.
Ngosipụta: Ana m eji nke m Okwu Mgbakwunye njikọ na edemede a.
Tags: avadanwa isiokwuisiokwu nne na nnaosisi ohiawordpress nwa isiokwuwordpress nne na nna isiokwuwordpress gburugburu